Ngwaọrụ ugbo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ngwaọrụ ugbo
N'ogige ọ bụ omenala iji nagide ọrụ na enyemaka nke ngwá ọrụ pụrụ iche. Nke a dị irè ma ọ bụrụ na ala ubi ahụ adịghị nnukwu. N'akụkụ buru ibu, ịchọrọ onye nnyemaaka a pụrụ ịdabere na ya nke nwere ike ịrụ ọtụtụ ụdị ọrụ mgbagwoju anya - traktọ. MTZ 82 traktọ bụ ezigbo nhọrọ. Ọ bụ ihe atụ nke traktọ na-adọkpụ na-acha ọkụ ọkụ, nke nke Minsk Tractor Works rụpụtara kemgbe afọ 1978.
Ada maka motoblock: nkọwa, ngwaọrụ, otu esi eme ya n'onwe gị
Ọrụ ọ bụla a na-arụ n'ọdụ ala ahụ na-ewe oge na mgbalị. Ya mere, ndị na-elekọta ubi na-ejizi ngwá ọrụ pụrụ iche eme ihe, dị ka ndị tillers. Ma ị nweghị ike ime ihe a niile. Enweghị nkwụnye pụrụ iche, ị gaghị enwe ike igbo ma ọ bụ ụwa ụwa, yana iwepụ snow na mpempe akwụkwọ. Ụgbọ ala na oche maka motoblock dị ugbu a dị oke ọnụ.
Ohere "Kirovtsa" na ọrụ ugbo, njirimara ndị ọrụ traktọ K-9000
Onye traktọ Kirovets nke usoro K-9000 bụ ihe atụ nke ọgbọ nke isii nke igwe arụpụtara na osisi St. Petersburg a ma ama. Onye trak K-9000 nwere ohere ịnweta ekele maka ahụmahụ na ngwa nke ọganihu nkà na ụzụ kachasị ọhụrụ na mpaghara a. Igwe ahụ nwere nnukwu ọrụ dị oke mma na njirimara arụmọrụ, nke na-enye ya ohere ọ bụghị naanị ịghara ịmị mkpụrụ, kama ọ bụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-enweghị atụ na mba ọzọ.
Esi eji ngwá ọrụ "Tornado" maka nụ
Manual cultivator "Tornado" - bụ ngwá ọrụ ugbo nke a na-eji na-arụ ọrụ. Ọ na-eme ka mma na ngwa ngwa rụọ ọrụ na ala. Ruo ugbu a, a gaghị ahụ ngwá ọrụ a n'ụwa nile. Naanị afọ ole na ole gara aga, na-enweghị ihe nkedo na shọvel dị n'ógbè, ọ dịghị ihe ọ bụla ị ga-eme.
N'ọrụ ugbo, obughi ihe puru ime n'emeghi ihe ndi puru iche. N'ezie, mgbe ị na-arụ obere ala ala, ọ gaghị adị mkpa, ma ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ịzụlite ihe dị iche iche ma ọ bụ na-azụ anụmanụ, mgbe ahụ, ọ ga-esi nnọọ ike ime n'enweghị ndị na-enyere aka. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere otu n'ime ụlọ ahịa ndị a ma ama, nke enyerela ndị ọrụ ugbo aka karịa ihe karịrị afọ iri na abụọ.
Iwu maka nhọpụta nke ndị na-ekpuchi ọka, nkọwa na foto nke ụdị ụdị ọka ọka
Mkpọpu ọka na-aba uru nke afọ ndị na-adịbeghị anya, bụ nke e mere iji mee ka ọrụ ndị ọrụ ugbo dịkwuo mfe. A na-ezube usoro a maka nri ihe ubi na anụ ụlọ na nnụnụ. Mkpụrụ ọka ọka ga-azọpụta gị ka ị ghara iburu ọka, ghee ya ma weghachite ya, ọbụnakwa kwụọ ụgwọ maka ego ahụ.
Ụdị ụdị nduku maka motoblock, uru na ọghọm nke iji ubi ahụ
Ndị na-arụ ọrụ ugbo na-arụ ọrụ mgbe nile na-agbasawanye ha, na-agbalị ime ka ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị na-azụ ahịa nwee obi ụtọ. Ogologo oge gara aga, na obere ugbo, a na-ewe ihe ubi naanị n'aka, ma taa, ọnọdụ agbanweela. Nnukwu ugbo ejirila nnukwu akuku ugbo jiri oge buru ibu, nke a na-adighi mfe maka ndi di obere.
Isi ihe nke trakta MTZ-80 na ugbo
N'ọrụ ugbo, maka nhazi nke nnukwu ebe a na-ejikarị ngwa ngwa. Otu n'ime ndị a na-enyere aka bụ traktọ MTZ-80, ọdịdị ọrụ nke anyị na-atụle n'isiokwu a. Nkọwa nke wiil nke wiilị Na wiil nke wiil bụ otu atụmatụ maka akụrụngwa nke akụrụngwa a: a na-agbanye engine na ngọngọ nke ngwa elekere na windo ụgbọala na-eji consoles.
Ngwaọrụ na njirimara nke traktọ MTZ-1221
Ụdị traktọ MTZ 1221 (ma ọ bụghị "Belarus") na-emepụta "MTZ-Holding". Nke a bụ nke abụọ kachasị ewu ewu mgbe usoro MTZ 80. Nlekọta ihe ịga nke ọma, njupụta na-enyere ụgbọ ala a aka ịnọgide na-edu ndú na klas ya na mba nke mbụ USSR. Nkọwa na mgbanwe nke traktị ahụ MTZ 1221 bụ ihe a na-ewere dịka traktọ nke na-ekpo ọkụ nke ụwa nke abụọ.
Obere obere traktọ si motoblock: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka
Ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nwere obere ala ala, na-eji ndị tillers na-arụ ọrụ nke traktọ, dịka ịzụta igwe zuru ezu ga-abụ onye ezi omume n'ime afọ iri. Echiche dị aṅaa bụ ntọghata nke motoblock ahụ na obere-traktọ, otu esi eme ma jiri ngwaọrụ dị otú ahụ, ị ​​ga-amụta site na isiokwu a. Ohere nke ngwaọrụ na ubi na ubi Obere-traktọ nke dabeere na motoblock, dabere na nhazi na mkpa gị, nwere ike iji mee ihe maka nchụpụ snow, ịtọpụ ala, njem ibu, poteto ihe ubi ma ọ bụ ihe ndị ọzọ.
Ike na njirimara nke ndị na-ewe ihe ubi "Don-1500"
Jikọta onye na-ewe ihe ubi "Don-1500" - nke a bụ afọ 30 kwesịrị ekwesị na ahịa, ezigbo mma, nke a na-eji arụ ọrụ taa. O siri ike ịhọrọ usoro maka ịrụ ọrụ. Ọ dị mkpa ịhọrọ ihe nlereanya na ihe kachasị mma ma ghara ịkwụ ụgwọ. Banyere ihe njirimara na njirimara nke ihe nlereanya Don-1500 A, B, H na P, anyị ga-agwa ya n'isiokwu a.
Ụdị isi nke ndị na-ewe ihe ubi na àgwà ha
Ahịa ahia na ọnọdụ oge a na-eto ngwa ngwa. Maka owuwe ihe ubi na ngwa ngwa, ọrụ ntanetị dị iche iche, ejiji ngwaọrụ na ígwè ọrụ. Mkpụrụ ọka ihe ubi na ihe oriri na-edozi ihe ugbu a enweghị ike iche n'echiche n'enweghị ihe nchịkọta ọka.
Gwakọta "Acros 530": nyochaa, ike ọrụ nke ihe nlereanya ahụ
Ndị na-ewe ihe ubi nke oge a na-elekwasị anya n'ịdị elu na nhazi nke ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ógbè ndị dị elu. "Akros 530" bụ usoro ọrụ ọkachamara iji zute kpọmkwem ihe ndị a dị elu na ụlọ ọrụ agro.
Ebube rake-tedders: ụkpụrụ nke ọrụ, mee ya n'onwe gị
Ruo ọtụtụ narị afọ, ngwá ọrụ ugbo fọrọ nke nta ka ọ gbanwee ụdị ha. O yiri ka o nweghi ike ime ka ha di nma. Ihe gbanwere mgbe ọganihu sayensị na nkà na ụzụ rutere ebe a. Karịsịa, rake a na-emebu ghọọ ngwaọrụ dị mfe na obere traktọ - nke a na - akpọ agwators.
Ngwongwo na-adịghị asọ oyi ma na-eguzogide oyi "Renklod collective farm"
Uzo esi etinye ogwu di iche iche iji merie onu ojoo na griin ha
Oral solution "Baytril" 10% - ntụziaka maka ojiji
Obere okooko osisi mara mma nke si n'Afrika Adenium Obese (Obesum)
Ihe nzuzo nke na-eto eto aloe spinous
Ụzọ nke mmeputakwa shefflera n'ụlọ: cuttings, epupụta, mkpụrụ
Ụdị marigolds: Pamostochie, nke dị nro, jụrụ. Nlekọta nke ahịhịa ndị a na-emeghe ala
Fatịlaịza maka eggplants: ụzọ kachasị mma isi na-eri eggplants iji nweta ihe ubi bara ụba